Sida loo Edit Videos on iPhone
> Resource > Video > Sida loo Edit Videos on iPhone
Sida kordhaya dadka isticmaala qalabka mobile adduunka oo dhan, telefoonnadii sida iPhone noqdaan qayb ka mid ah nolol maalmeedka dadka. Hadda ka hor, aan u isticmaalno in ay wacaan, halka maalmahan aan u isticmaalno si aad u dhegaysato videos music, record / watch / edit, ciyaaro kulan iyo wixii la mid ah. Wixii video tafatirka, halkii ay ka sixiddiisa on PC si toos ah, dadka isticmaala iyo aad u badan ayaa eegaya hab fiican in wax ka bedel ku iPhone si toos ah. Halkan waxaan jeclaan lahaa in ay bixiyaan si ay u bixiyaan ugu yaraan 3 fursadaha si aad u xaalkaa videos on iPhone.
1. Easy - Edit Videos on iPhone la Photos App
Ganacsi ah, waxaan ku talin doonaan qaar ka mid ah barnaamijyadooda dhinac saddexaad editor video (bixisay) si toos ah u isticmaala marka ay doonayaan inay qaar ka mid ah qalabka tafatirka video fududahay in la isticmaalo, laakiin xoog badan. Dhab ahaantii, haddii aad u baahan tahay oo kaliya qaar ka mid ah shaqada tafatirka ee aasaasiga ah sida goo, in aad dhammaystirto karaa Photos app gundhig ugu iPhone 6 toos ah.
a. Qor video ah leh app Camera (wareegay PHOTO si VIDEO).
b. Riix badhanka duubo casaan, bilaabaan si ay u qoraan video ah, ka dibna badhanka (wareega) tuujin doonaa in button yar oo cas (square) sida raac, riix badhanka cas (square) mar kale ka dib markii uu dhameystirtay toogashada.
c. Fur app Photos ah, doortaan video mudista.
d. Si toos ah, waxaa jira bar slidebar / sheeko muujinaya kor ku xusan, ka dibna tubbada ay noqoto midig ama bidix si ay u doortaan qaybta aad rabto in aad jar by jiidayeen ay noqoto meesha jaalaha ah.
e. Guji button ka goo, taas oo muujinaysa on geeska midig ee sare, ka dibna aad leedahay 3 doorasho: jar Original, Save clip sida New iyo Cancel. Guud ahaan, waxaan dooran doonaa Save sida clip New.
f. Dib u clip cusub oo riix badhanka share ah, taas oo ku geeska bidix ee hoose. Dooro channels sida Quraanka, Mail, iCloud, YouTube, Facebook iyo si aad ku doonayaan in ay la wadaagaan.
Taasi waa shaqo tafatir oo keliya, laakiin sidoo kale qalab ugu isticmaali tafatir ah ee video caashaqi jiray. Haddii aad rabto in qaar ka mid ah qalab horumarsan sida jarida, lana siii, qoqobada, galinta horyaal / qoraalka / Intro / outro / music / voiceover oo dheeraad ah, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah siyaabaha sare iyo pro.
2. Advanced - Edit Videos on iPhone la Free Video Editor Apps (Mobile)
Waxa curiyey qalabka tafatirka xoog badan, dad badan oo Chine video tafatirka waxaa loo isticmaali karaa si ay u abuuraan cajiib ah videos / filimada. Waxay loo kala saari karaa by criterions kala duwan. Halkan ayaan kaliya wadaagaan qaar ka mid ah barnaamijyadooda editor video free on iPhone.
Waa app kaliya in ay oggolaadaan in dadka isticmaala si ay u abuuraan "Motion collage" la sawiro iyo videos. Taasi waa sababta jira arrimo badan oo soo jeeda, waayo, waxaad inuu ku soo shirtagi sawiro iyo videos. Waxaad dajiyaan karaa files warbaahinta via 3 channels kala duwan - app Photos, diiwaan leh camera ama online (kaliya ee photos). Waxaad Mozilla karo gudaha / dibedda / shaandheyn adigoo gujinaya soo jiiday badhanka beddesha on geeska kore ee midigta ah ee video. Qalabka tafatirka kale sida flipping video, isagoo intaa ku daray qaar ka mid ah video deg dega ah sida diirada qaybta Saamaynta ama xuduudaha iyo lafdheerta videos. Waxaa ku jira qaar ka mid ah qalab lagu maareeyo sida Lock, kor iyo hoos si ay u abaabulaan markii ul in asalka files warbaahinta. Dhammaan videos saxar la wadaagi kartaa Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, Instagram oo dheeraad ah.
CUT cute waa ka badan sida Video Editor xirfadeed ee iPhone / iPad. Tilmaamaha waa la heli karo iyo saaxiibtinimo dadka isticmaala cusub. Dhammaan tallaabooyinka tafatirka waxaa loogu talagalay si goan. Waxaad ka heli doontaa video demo oo dhan xubno tafatirka ee waqtiga ee shaashadda guriga ka. Ka dib markii la gelin magaca oo calan kor u qaraar, nooca midabka, asalka, halkan waxaan ku tag aagga tafatirka leh suuqa kala eegis iyo waqtiga hoos ku qoran. Riix badhanka sii dheer, waxaad ku dari kartaa noocyada warbaahinta sida video, sawir, qoraal, music, codka iyo is-aadka.
Video iyo sawiro: 3 channels si dejinta, Qaasaali ka Photos app, File Sharing ka barnaamijyadooda kale oo lagu qoro Camera. Waxaa jira qaar ka mid ah loox video qarsoon Maktabadda, taas oo la keeno karo sida sawir aad.
Text: nooca qoraalka aad rabto iyo jiidi square in ay reposition, double click si aad u ogaato goobaha dheeraad ah oo ku jeclaan Yeelo muuqa, Soo Celinta ee default iyo Edit Text.
Music: gundhig music waa heer sare, laakiin khayraadka xaddidan yahay - oo kaliya 4 heeso music la FX 22 dhawaaqa. Haddii aad qabto files music qaar ka mid ah iPod ama barnaamijyadooda kale, waxa ay si toos ah u dajiyaan karaa.
Voice: Exit CUT cute, Tag app Settings> Privacy> Microphone, ka dibna loo furo app this. Waxaad bilaabi kartaa in cod record.
Is-Aadka: tani waa shaqo ugu gaarka ah ee app this. Waxaad sawiri kartaa wax la qaabab kala duwan oo aad jeceshahay oo qayb ka ah this video leh burush kala duwan.
Dhammaan qalabka tafatirka kuwa files warbaahinta ku qoran yihiin hoos, sida koobiga, kala, guurka, isku shaandheyn, flip, qabashada iyo goob kale oo la mid ah mugga, hufnaan, xawaaraha.
Sababta oo ah waxa boos sidii xirfad video editor, qayb ka mid ah bulshada waa mid xadidan. Wuxuu ka kooban yahay 4 siyaabood oo loo badbaadiyo / wadaagaan video ah saxar - Email, Album, Facebook iyo YouTube.
Haddii aad tahay taageere yaabin ah, aad qeybiso jeclahay tafatirka qalab video badan! Saamaynta dhawaaqa qarxa iyo buug-u waxyoonay saamaynta muuqaal maadda ah in ay dunida a awood super idiinka keeno. Free version keliya oo ay siisaa 2 Malaa'igta kala duwan si aad u la jihada qaarkood toogtaan. Waa dhif inay la mid ah sida qalabka tafatirka video kor ku xusan, balse kaliya ay xigsanayaan kuwa u baahan tahay saamaynta super-xoog sida fireballs toogashada ka gacmahaaga, laser indhahaaga, ama loo xakameeyo canaasiirta, teleport iyo in ka badan.
Kuwa Jecel awood super dooran doonaan Super Power video editor, halka kuwa jecel mucjiso ama khiyaali alaabtayda oo qaadi kara Lens Ruuxa. Shaqada video tafatirka aasaasiga ah loo isticmaalo app tani waa multiscreen waxay u engegi doonaan gudaha / dibedda. First of dhan, dooran multiscreen aad rabto si ay u muujiyaan. Tusaale ahaan, haddii aan rabo inaan qaato video naftu ku saabsan muuqasho dambe fadhiistay ii ah, waxaan dooran kartaa jir 2-shaashad. Markaas ayaan u baahan tahay in ay toogtaan 2 goobaha kala duwan si gooni gooni ah booska kala duwan oo ka dibna ku dar ka baxeysa ee gudaha / dibedda saamaynta la seconds kala duwan. Halloween waa imanaysaa, waxaad ku dari kartaa qaar ka mid ah heesaha cabsi Halloween. Laakiin waxa ay u muuqataa music oo dhan la kaliya laga keeno karaa Lugood Library. Waxa kale oo aad u guurto karaa ulaha gudban ka kala meesha aad rabto ku dar video filtarrada hor keydinta / qaybsiga. Waa maxay qoto dheer ii soo bandhigay waa xeerka ee hawlaha kala duwan, taas oo u sahashay u greenhands.
Waxaan jeclahay VivaVideo badan sababo dhowr ah. Bal aan ka bilowno ka videos dejinta. Waxaad dajiyaan karaa video maxaliga ah ee telefoonka gacanta si toos ah click Quick Edit ama Pro Edit. Haddii aad rabto in aad si ay u qoraan video camera la, waxaad riixi kartaa Ciidamada. Ma jiraan waxyaalo badan marka la isticmaalayo Quick Edit, taas oo inta badan jecel yahay Photos app, bixinta kaliya function goo. Inkasta oo haddii aad rabto in lagu soo qabto video ah oo si toos ah xaalkaa ama qabsadaan video ah ka dib markii la furay Pro Edit, waxaan waxay leedahay waxyaalo dheeraad ah oo aan idinla wadaago.
Oo la wareegtay - waxaa jira qaabab kala duwan in ay toogtaan 3 videos. Aasaasiga ah waxaa loogu talagalay toogashada caadiga ah, FX u toogashada gaar ah la stickers iyo Funny waa u toogashada gaar ah saameyn kala duwan sida daanka yar oo madaxa u weyn. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah video filtarrada dagdag ah in hab aasaasiga ah.
Pro Edit - ka dib markii ay qabteen clip ah, oo aad kadhawaajin karto this function Edit Pro. Waxaa ku milmaan karaa, kala, nuqul ka digsiga & Mozilla off iyo dardar / hoos video clips. Waxa kale oo badan oo horyaal, FXs, mawduucyada, filtarrada, heeso music, kala guurka iyo dubs waxaa la siiyaa.
More barnaamijyadooda free video tafatirka ay sugayaan in dib loo eego.
Hubi in ka badan iPhone video tifatirayaasha la qaababka ugu muhiimsan halkan.
iMovie (Kaliya lacag la'aan ah iOS8)
3. Pro ​​- Edit iPhone Videos la Video ayeey Programs (PC)
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad wax ka bedel iPhone videos si aad u filimada filim oo kale ah, si aad u desktop guuri kartaa guddiga. Qaar ka mid ah saamaynta gaar ah sida Greenscreen , Arag Ogaanshaha, Faceoff ,-up Close noqon karaa oo kaliya laga heli karaa barnaamijka video tafatirka u PC. Tixgeli Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (Windows iyo Mac version), kaas oo la kulmi kartaa baahida oo dhan iyo doonayo kaliya $39.95. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Sida loo Connect ah iPhone (iPhone 6 Plus mid), iPad in Your TV?
Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan Screencast
All inaad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan H.265
Top 10 4K Video Kaameerada